Imifanekiso eqingqiweyo kaGina Carano ehamba zeNqono kunye neMifanekiso yoSondo - Indawo Yolondolozo Lwembali Yomboniso
Imifanekiso eqingqiweyo kaGina Carano ehamba zeNqono kunye neMifanekiso yoSondo
Indawo Yolondolozo Lwembali Yomboniso
Jonga umlo oshushu we-MMA kunye nomlingisi uGina Carano boobs zeze kunye neesile kwimifanekiso eshushu esiyiqokelele ecaleni kweevidiyo zakhe ezingamanyala! Ubonise iititi ezi-busty, inani lemidlalo yeebikini, iesile elikhulu eliqeqeshiweyo kunye nokumila. Akakhange ayibonise ipussy yakhe, kwaye ndifuna ukuyibona kakubi!
UGina Joy Carano ngumlingisi waseMelika, umabonakude kunye neenkwenkwezi zosasazo zasekuhlaleni, imodeli yokomelela komzimba, kunye nomculi owayekhe waxubana nemfazwe. U-Sexy Gina waqala uqeqesho ngaphambi kokuba atshintshele kwi-MMA yokhuphiswano. Apho wayekhuphisana eStrikeforce nase-EliteXC kwaye wabonwa kwezi ntsuku kwiphephancwadi le-ESPN kunye noMaxim.
Ukuthandwa kukaCarano kwabekwa kwindawo yakhe yesi-5 kuluhlu lwabafazi abaphezulu abali-10 abanempembelelo zika-2008 kunye nobuso be-MMA yabasetyhini. UGina walwa neCris Cyborg eStrikeforce kwaye yayilixesha lokuqala abafazi ababini bebeka isiganeko esikhulu seMMA. UCarano usebenze njengoCrush kuthotho lwenyani lwe-'American Gladiators ', ngaphandle kwendandatho. Ukushiya kwakhe umhlala phantsi kukhuphiswano, uGina waba ngumdlali weqonga. Uvele kwifilimu ethi 'Igazi kunye neThambo', emva koko ' IHaywire ',' Fast & Furious 6 ',' Deadpool 'kunye neDisney + uthotho' iMandalorian '.
UGina Carano imifanekiso enganxibanga kunye neminqweno
Iimbaleki ezishushu zikho kuyo yonke iMostra Musa. Enye yazo kushushu uGina Carano kunye neebhutsi zakhe ezihamba ze, iingono ezilukhuni, iesile elishushu, kunye nomzimba onezihlunu. Wenza iifoto ze-'Maxim 'kunye' Playboy 'ze. Yonke intshi yomzimba wakhe ogqibeleleyo indenzela amandongomane eCarano!
UGina mhle, kodwa sinomfazi omnye ocacileyo apha, ovuza kanye kwi-Mostra Musa! Apha zi Iinqunu zika-Angela Magana ezivuzayo kunye ne-tape yesondo !
UGina Carano porn kunye nemiboniso eshushu
Apha siqokelele iindawo ezininzi ezishushu zeGina Carano kunye neevidiyo ze-porn simahla! Ubonwa enxibe iimpahla ezahlukileyo, indawo yakhe yesini evela 'kuHaywire' kunye nezinye iindawo ezihamba ze kunye nezesondo eziqokelelwe kwividiyo enye! UGina kufuneka ajonge ngakumbi kwikhondo lomsebenzi wakhe, wonke umlo olungileyo okanye umdlali weqonga unomxholo ovuza apha. NguGina nje ongekhoyo. Kwaye asithandi ukulinda. Awuyithandi loo nto ... Cofa udlale kwaye wonwabe, uzakuvuza kungekudala, ndiyathemba!
Isikhangeli sakho asihambisani nevidiyo ye-HTML5.
U-anna kendrick uvuza ze
selma hayek iteyiphu yesini
miley cyrus avuza iifoto abahamba ze